‘जहाँ विद्यार्थी, त्यहीँ परीक्षा’ : यस्तो छ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको ‘डोर टु डोर मेथड’ – Dr. Tilak Acharya
काठमाडौं : कक्षा कोठा कहिले खुल्ने पत्तो छैन। धेरैजसो स्कुल र विश्वविद्यालय छलफलमै छन् – पढाउन त जसोतसो मिल्ला तर परीक्षा कसरी लिने? एसइइको परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनमै टर्‍यो। अब महामारीबाट जोगाउँदै शैक्षिक संस्था कसरी खोल्ने?
सरकारसँग न त रणनीति न त कुनै योजना नै। जेनतेन अनलाइनबाट भएको पढाइको परीक्षा लिन स्कुल कलेजलाई सकस छ – सबैको पहुँचमा इन्टरनेट छैन। भएको ठाउँको पनि गुणस्तरीय छैन। यही तनावमा छन् शैक्षिक संस्थादेखि अभिभावक र विद्यार्थी।